Wararka - Xarunta suuq geynta DTS ee suuq geynta waxqabadka dukumiintiyada
Maalintii Axadda, 3-da Luulyo, 2016, heer kulku wuxuu ahaa 33 darajo Celsius, Dhammaan shaqaalaha Xarunta Suuqgeynta ee DTS iyo qaar ka mid ah shaqaalaha waaxyaha kale (oo ay ku jiraan Guddoomiyaha Jiang Wei iyo hoggaamiyeyaasha suuq geynta kala duwan) waxay fuliyeen hal ku dhigga ah “socodka, fuulitaanka buuraha, cunista dhibaatooyin, dhidid, soo jeedid, iyo shaqo fiican ”. Socodka lugta.
Barta tababarkaan laga bilaabayo waa xarunta dhexe ee shirkada, fagaaraha kuyaala dhismaha xafiiska hortiisa DTS Food Industrial Equipment Co., Ltd.; barta ugu dambeysa waa Zhushan Park ee Magaalada Zhucheng, safarka buurta laga soo qaadayna waa in ka badan 20 kiilomitir. Isla mar ahaantaana, si loo kordhiyo dhibaatada hawshan socodka ah loona oggolaado shaqaaluhu inay ku soo dhowaadaan dabeecadda, shirkaddu waxay si gaar ah u dooratay waddooyinka adag ee baadiyaha ku yaal.
Intii lagu guda jiray layligan tareenka, ma jirin wax gaadiid samatabbixin ah, dhammaanna way baxayeen, shaqaale badan ayaa u maleeyay inaysan joojin karin, gaar ahaan qaar ka mid ah shaqaalaha, waxay sameeyeen fikrad ah inay kalabar istaagaan Si kastaba ha noqotee, iyadoo la kaashanayo kooxda iyo kor u qaadista sharafta wadajirka ah, 61 shaqaale ah (oo ay ku jiraan 15 haween shaqaale ah) oo ka qayb qaatay tababbarka ayaa soo gaadhay cagta buurta Zhushan, laakiin tani maahan dhamaadka tababbarkayagii, ujeedkeenu waa kan ugu sarreeya Si aan buurta u gaadhno mar qudha, waxaan ku nasanay buurta cagteeda waxaanan ku dhaafnay raadkeena halkan.
Nasasho gaaban ka dib, kooxdii waxay bilaabeen safarkii buurta; wadada loo fuulo waxay ahayd mid khatar ah oo dhib badan, lugahayagu waxay ahaayeen dhanaan oo dharka ayaa qoyay, laakiin sidoo kale waxaan helnay muuqaal aan ka dhex muuqan xafiiska, cawska cagaaran, buuraha cagaaran iyo ubax udgoon.
4 saacadood iyo badh kadib, waxaan aakhirkii gaadhnay buurta dusheeda;
Buurta dusheeda, dhammaan dadkii ku lugta lahaa tababarka waxay magacyadooda ku siiyeen boodhka shirkadda, taas oo ay weligeed qaanuunka u haynayso shirkaddu.
Isla mar ahaantaana, ka dib markii uu fuulay buurta, Madaxweyne Jiang ayaa isna khudbad jeediyay. Wuxuu yiri: In kasta oo aan daallannahay oo dhidid badan nahay, ma haysanno wax aan cunno ama cabno, laakiin waxaan haysannaa jir caafimaad qaba. Waxaan cadeynay inaysan jirin wax aan macquul aheyn shaqo adag.
Kadib 30 daqiiqo oo nasasho ah buurta dusheeda, waxaan fuulnay wadada hoos udhacaysa buurta waxaanan kulaabanay shirkada 15:00 galabnimo.
Markaan dib u milicsano geedi socodkii tababarka oo dhan, waxaa jiray shucuur badan. Wadada dhexdeeda, waxaa joogtay marwo tuulada ka mid ah oo dhahday waxaad samaysay maalintaas kulul, waxa la sameeyo haddii aad daasho oo aad xanuunsato; laakiin shaqaalaheennii dhammaantood way dhoola caddeeyeen oo way sii wateen. Haa, maxaa yeelay waxba kuma laha daal. Waxaan rabno waa ogolaansho iyo cadeyn nafteena ah.
Laga soo bilaabo shirkadda ilaa Zhushan; laga bilaabo maqaarka wanaagsan illaa maqaarka; laga bilaabo shakiga illaa aqoonsiga naftaada; tani waa tababarkayagii, kani waa goosigeena, waxayna sidoo kale ka tarjumaysaa dhaqanka shirkadaha ee DTS, shaqeynta, Barashada, horumarka, abuurista, goosashada, farxadda, wadaagista.
Waxaa jira kaliya shaqaale heer sare ah iyo shirkado heer sare ah. Waxaan aaminsanahay in kooxda noocaas ah ee dadaalka badan iyo shaqaalaha joogtada ah, DTS ay noqon doonto mid aan laga adkaan karin lagana adkaan doonin tartanka suuqa mustaqbalka!